Inona ny atao hoe Marketing Pay-Per-Click? Anisan'izany ny statistika manan-danja! | Martech Zone
Ny fanontaniana iray mbola anontaniako avy amin'ny tompona orinasa matotra dia ny tokony hataon'izy ireo marketing marketing pay-per-click (PPC) na tsia. Tsy fanontaniana eny na tsia tsotra izany. PPC dia manolotra fotoana mahavariana hanosehana dokam-barotra eo imason'ny mpihaino amin'ny fikarohana, sosialy ary tranokala izay mety tsy tratranao matetika amin'ny alàlan'ny fomba voajanahary.
Inona ny atao hoe Marketing Pay Per Click?
PPC dia fomba fanaovana dokambarotra an-tserasera izay andoavan'ny mpanao didy sarany isaky ny kitihina ny doka ataon'izy ireo. Satria mila mpampiasa ny tena handray andraikitra, io fomba doka io dia malaza be. Ireo mpivarotra dia afaka mahita ny fahafahan'ny PPC manerana ny motera fikarohana, media sosialy, ary tambajotra dokambarotra. Tsy toy ny doka nentim-paharazana izay ampandoavina CPM (vidiny isaky ny arivo ny fiheverana), ny PPC dia miakatra amin'ny CPC (vidiny isan-tsindry). Ny CTR (tahan'ny click-through) dia isan-jaton'ny isan'ny impiry izay tsindry ataon'ny mpampiasa raha mahita doka PPC izy ireo.
Tokony hanao PPC ve ianao? Eny, manoro hevitra aho ny hanana fototra tranomboky atiny ary tranonkala miaraka amin'ny lakolosy sy sioka rehetra alohan'ny hanombohanao mandany vola iray taonina amin'ny doka. Ny ankanavaka, mazava ho azy, dia raha tsy azonao antoka izay atiny tena hiteraka fiovam-po. Ny fitsapana ny fitambaran'ny teny lakile sy ny doka amin'ny dokambarotra ao amin'ny PPC dia afaka mitahiry vola taonina sy fotoana laniana amin'ny marketing atiny raha tsy azonao antoka.
Manoro hevitra ny mpanjifa aho amin'ny ankapobeny mba hahazo tranokala, tranomboky misy atiny, pejin-tranonkala fipetrahana sasany ary programa mailaka… avy eo ampiasao ny PPC hampitombo ny paikadim-barotra nomerika ankapobeny. Rehefa mandeha ny fotoana dia azonao atao ny manangana ny fitarihana biolojika anao ary mampiasa tsimoramora ny PPC rehefa mila ny fitarihana ianao.
Ity infographic avy amin'ny SERPwatch.io, Ny fanjakan'ny karama-isan-tsindry 2019, manolotra fampahalalana an-taonina maro momba ny indostrian'ny PPC, ny fomba fampisehoana ny fizarana, ary misy ny tendrombohitra misy ny zava-misy mifandraika amin'izany.
Antontan'isa PPC manan-danja ho an'ny 2019
Taona lasa, Ny fandaniana doka amin'ny fikarohana Google dia nitombo 23%, ny fandaniana doka amin'ny fiantsenana dia nitombo 32%, ary ny fandaniana doka an-tsoratra dia nitombo 15%.
Around 45% amin'ny orinasa kely dia mampiasa vola mavitrika amin'ny PPC hampitombo ny asany.
Araka ny fikarohana nataon'ny Google, ny doka fikarohana dia afaka manatsara ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika by 80%.
Ny doka tohanana dia hatramin'ny Tsindrio 2 amin'ny 3 amin'ny pejy voalohany an'ny Google.
Ny fampielezan-kevitra fampisehoana Google dia mahatratra mihoatra ny 90% n'ny mpampiasa Internet manerantany.
Mahagaga, 65% amin'ny mpanjifa rehetra tsindrio ny rohy mankany amin'ny vokatra iray.
Ny valin'ny fikarohana karama dia miteraka salanisan'ny 1.5 heny ny tahan'ny fiovam-po ny valin'ny fikarohana organika.
In 2017, fitaovana finday namokatra 55% amin'ny tsindry doka amin'ny fikarohana Google.
70% amin'ireo mpikaroka finday no miantso orinasa iray mivantana avy amin'ny Google Search.
The salan'isan'ny tsindry Click-through amin'ny tambajotra fikarohana dia 3.17%. Ny CTR antonony ho an'ny valiny ambony karama dia 8%!
Aza hadino ny mijery ny infographic iray manontolo eto ambany mihoatra ny statistika 80 mahery!
Tags: Vidin'ny kliobaFNTmanao ahoana ny laharan'ny ppcfikarohana karamadokam-barotra sosialy karamamandoa isaky ny kitihoppcppc marketingserpwatch
PERIODS: Ampitomboy ny pejy an-tranonao na ny fantsona misy ireto atiny 7 ireto